Race 3 oo u suura gashay inuu soo xareeyo 300 Crore ganacsigiisa dibad iyo dal la isku daray – Filimside.net
Race 3 oo u suura gashay inuu soo xareeyo 300 Crore ganacsigiisa dibad iyo dal la isku daray
July 10, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: July 10, 2018
Filimka weyn Race 3 dhaliil walbo oo loo soo jeediyay siweyn uma aysan dhaawicin ganacsigiisa Boxoffice-ka marka loo fiiriyo inuu haatan ka talaabay 300 Crore ganacsi ah dibad iyo dal marka la isku daro (Worldwide Gross) wuxuuna ku istaagayaa 303 Crore ganacsigiisa haatan maraayo madaama uusan sii socon karin inta badana uu ka dagay tiyaatarada dibad iyo dal.
Filimka Race 3 gudaha Hindiya wuxuu kasoo xareeyay 213 Crore (Gross Money) waa lacagta canshuurta ka hor uu keenay.
Sidoo kale Race 3 suuqyada caalamka wuxuu kasoo xareeyay $13M (90M) taasi oo ka dhigan ganacsiga guud ee uu sameeyay 303 Crore (Worldwide Gross) lacagta gudaha Hindiya guud iyo tan daafaha caalamka oo la isku daray.
Race 3 ganacsiga ugu wacan wuxuu ka sameeyay Gulf-ka asigoo ka noqday filimka 2018 suuqaas ugu lacagta badan wuxuuna kasoo xareeyay $5.15M waana filimka 10-aad ee Gulf-ka lacagaha ugu badan kasoo xareeyo taariikh ahaan.
Waxaa xusid mudan filimka weyn Padmaavat inuu Gulf-ka kasoo xareeyay $4.5M taasi oo muujineyso in Race 3 si waali ah suuqa Gulf-ka ama Khaleej-ka kaga gadmay sanadkan.
Race 3 suuqa labaad ee uu ganacsi heer sare ah ka sameeyay waa UK asigoo ka keenay £1.17 million waana ganacsi weyn madaama suuqa UK dhawaanahan gaabis ku imaanayay oo aflaanta Hindiga ka gadmeynin.
Race 3 waa filimka 19-aad ee taariikh ahaan lacagaha ugu badan soo xareeyo isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka sidoo kalena waa filimka 19-aad ee 300 Crore ganacsiga dibad iyo dal la isku daray ka talaabsado.
Fadlan hoos kaga bogo 10-ka filim ee lacagaha ugu badan sanadkan 2018 soo xareeyeen isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka (Worldwide Gross):
1. Padmaavat – 546 crore
2. Sanju – 460 crore (11-maalmood)
3. Race 3 – 303 crore (24-maalmood)
4. Baaghi 2 – 249 crore
5. Raazi – 192 crore
6. Sonu Ke Titu Ki Sweety – 149 crore
7. Raid – 145 crore
8. Veere Di Wedding – 134 crore
9. Pad Man – 124 crore
10. Parmanu – The Story Of Pokran – 91 crore
Waxaa Aqrisay 739